NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA! – filazantsaramada
NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA!
Publié parfilazantsaramada	 février 20, 2015 février 13, 2015 Laisser un commentaire sur NY FANOMPOANA AN’ANDRIAMANITRA!
« Fa hianareo jentilisa no itenenako. Koa satria Apostolin’ny jentilisa aho, dia mankalaza ny fanompoako, raha mba misy hahazoako hampialona ireo mifanapa-tsinay amiko, mba hamonjeko ny sasany aminy. » (Romana 11:12-14)
Ny hoe “diakona” dia avy amin’ny teny Grika hoe: Diakonia, FANOMPOANA no heviny, na asa fanompoana, ary ny apostoly Paoly no tena nanambara an’io diakonia io izay hita ao amin’ny bokin’ny Romana 11:11-14. Eo amin’ny andininy faha 12, izy io dia manambara FAMONJENA. I Paoly dia nanao asa-fanompoana nitarika ny jentilisa ho amin’ny famonjena (ary voalazany fa mety nitarika ireo nifanapa-tsinay taminy ho amin’ny fahatafintohinana izany). Ny zava-dehibe dia ny famonjena nentin’izany fanompoana izany, na dia nisy zava-maro niaretana sy nihatra aza tao: ny vokatra dia ny famonjena. Ny asa diakonaly lehibe nataon’ny Tompo Jesosy Kristy dia ny nanekeny hiala tany an-danitra ka nanaiky ho tonga olona, ka tsy nataony hofikirina mafy ny fitoviana tamin’Andriamanitra fa nofoanany ny tenany ka nanaiky ho manampitoviana tamin’ny olombelona Izy, ary nanaiky hitondra ny fijaliana tsy tokony ho Azy fa tokony ho antsika. Na dia nihatra hatramin’ny fahafatesana aza izany, tsy fahafatesana be voninahitra fa fahafatesana mifangaro fanalam-baraka: izany no tena fara-tampony amin’ny asa diakonaly. Efa vitan’ny Tompo izany asa izany, fa isika kosa no migoka ny mamy. Izany asa diakonaly izany no andraisantsika Famonjena: izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, raha manaiky ny asa diakonaly nataon’I Jesosy isika dia mandray ny Famonjena. Ny ràn’I Jesosy no manadio antsika, izany no famonjena. Alohan’ny hirosoantsika amin’ny asa fanompoana dia aoka isika hanaiky hosasan’ny ràn’I Kristy. Mety efa nandray izany fanadiovana izany isika teo amin’ny batisa, fa tokony avaozintsika isan’andro izany fandraisana ny fanadiovany satria raha hoy isika hoe: tsy manana ota isika dia mamita-tena ary ny marina tsy mitoetra ato anatintsika.
-Ny asa Diakonia dia asan’olona voavonjy, tsy maintsy olona efa nandray famonjena ary miaina izany famonjena izany: ny olona tsy miaina ny famonjena tsy afaka mitarika ho amin’ny famonjena. Mba ahatonga antsika mpanompo ho fitaovana mahomby eo ampelatan’Andriamnitra, dia isika aloha no mahatsiaro ny hasarobidin’ny Famonjena, ary miaina izany Famonjena izany.
Publié parfilazantsaramada février 20, 2015 février 13, 2015 Publié dansUncategorized